”လစာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲ” – ADS Myanmar Blog
အလိုက်မသိတဲ့ လူတွေက မေးကြတယ်။ ”မင်း လစာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲ” တဲ့။
အင်းလေ. . . လစာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဖြေရတာ မခက်လှပေမယ့် တစ်လကို ၈သောင်း၊ ၁သိန်းလောက်သာ ဝင်တဲ့ လစာနည်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ အသက်ရှူကြပ်စရာကြီးပဲဗျာ။
”ဒီနေ့ ဈေးက ဘာဝယ်ခဲ့သလဲ” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဝက်သား၊ကြက်သား ဝယ်သူအဖို့ မေးခွန်းဖြေရတာ မထောင်းသာပေမယ့် ကန်စွန်းရွက်ဝယ်လာတဲ့ အိမ်ရှင်မအတွက် အမောဆို့စေတာပေါ့။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း တစ်ဖက်သား အဖြေရကြပ်စေတဲ့မေးခွန်းတွေကို ရှောင်ကျဉ်ကြရင် မကောင်းကြဘူးလားဗျာ။
ကဲ . . . လစာနည်းလို့လည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ လစာကောင်းတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ကျွန်တော်တို့ Ads.com.mm အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ လင့်ခ် https://www.ads.com.mm/job-offers အတိုင်း အခမဲ့လျောက်လို့ရပါတယ်။
အလိုကျမသိတဲ့ လူတှကေ မေးကွတယျ။ ”မငျး လစာ ဘယျလောကျရပွီလဲ” တဲ့။
အငျးလေ. . . လစာကောငျးတဲ့ သူတဈယောကျအတှကျတော့ ဖွရေတာ မခကျလှပမေယျ့ တဈလကို ၈သောငျး၊ ၁သိနျးလောကျသာ ဝငျတဲ့ လစာနညျးတဲ့သူတှအေတှကျတော့ မေးခှနျးကိုဖွဖေို့ အသကျရှူကွပျစရာကွီးပဲဗြာ။
”ဒီနေ့ ဈေးက ဘာဝယျခဲ့သလဲ” ဆိုတာမြိုးပေါ့။ ဝကျသား၊ကွကျသား ဝယျသူအဖို့ မေးခှနျးဖွရေတာ မထောငျးသာပမေယျ့ ကနျစှနျးရှကျဝယျလာတဲ့ အိမျရှငျမအတှကျ အမောဆို့စတောပေါ့။ လူမှုပတျဝနျးကငျြမှာလညျး တဈဖကျသား အဖွရေကွပျစတေဲ့မေးခှနျးတှကေို ရှောငျကဉျြကွရငျ မကောငျးကွဘူးလားဗြာ။
ကဲ . . . လစာနညျးလို့လညျး စိတျပူစရာမလိုတော့ပါဘူးနျော။ လစာကောငျးတဲ့ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြားကို ကြှနျတျောတို့ Ads.com.mm အခမဲ့ကွျောငွာဝကျဘျဆိုကျမှာ လငျ့ချ https://www.ads.com.mm/job-offers အတိုငျး အခမဲ့လြောကျလို့ရပါတယျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on June 12, 2016 June 10, 2016 Categories Ads.com.mmTags Knowledge
Previous Previous post: ငှက်ပျောသီးစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ